HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mooré Ndebele Ndonga Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
“Rehefa hitanareo izany rehetra izany, dia fantaro fa efa akaiky izy, eny, efa eo am-baravarana.”—MAT. 24:33.
Inona no nitranga eran-tany nanomboka tamin’ny 1914, ka manatanteraka ny faminanian’ny Baiboly?
Manaporofo inona ny toetran’ny olona miharatsy?
Inona no tsapanao amin’izao farany efa tena akaiky izao?
1, 2. a) Inona no mety hahatonga antsika tsy hahita zavatra sasany? b) Inona no fantatsika momba ny Fanjakan’Andriamanitra?
EFA voamarikao angamba fa tsy mitovy ny tsipiriany tadidin’ny olona, na dia samy nanatri-maso zava-nitranga iray ihany aza izy ireo. Mety tsy ho tadidin’ny olona iray koa izay noresahin’ny dokotera taminy, rehefa avy nilaza ny aretiny ilay dokotera. Mety ho sahirana mitady ny lakileny na ny solomasony ny olona iray, nefa eo ambany masony ilay izy. Milaza ny mpikaroka fa lasa tsy mahita na manadino zavatra isika, rehefa miezaka manao zavatra maro indray miaraka. Toa zavatra iray ihany mantsy no azon’ny atidoha ifantohana.
2 Toy ny jamba koa ny olona maro, manoloana ny zava-mitranga eran-tany. Mety hanaiky izy ireo hoe niova be ny fiainana nanomboka tamin’ny 1914, nefa tsy azony ny dikan’ireny zava-mitranga ireny. Fantatsika kosa rehefa nianatra Baiboly isika, fa azo lazaina hoe efa tonga tamin’ny 1914 ny Fanjakan’Andriamanitra, rehefa lasa Mpanjaka tany an-danitra i Jesosy. Mbola tsy nivaly tanteraka anefa tamin’izay ilay vavaka hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!” (Mat. 6:10) Rehefa horinganina ity tontolo ratsy ity vao tena hivaly io vavaka io. Amin’izay ny sitrapon’Andriamanitra vao hatao etỳ an-tany, toy ny any an-danitra.
3. Inona no tombony ananantsika noho isika mianatra ny Tenin’Andriamanitra?
3 Mianatra tsy tapaka ny Tenin’Andriamanitra isika, ka hitantsika fa tanteraka izao ny faminaniana. Tsy toy izany mihitsy anefa ny ankamaroan’ny olona. Variana be amin’ny fiainana izy, ka tsy hitany ny porofo mazava hoe efa nanjaka i Kristy nanomboka tamin’ny 1914 ary tsy ho ela dia handringana an’ity tontolo ratsy ity. Eritrereto anefa izao: Raha efa taona maro no nanompoanao an’i Jehovah, mbola mino ve ianao fa efa tena akaiky ny farany rehefa jerena ny zava-mitranga eto an-tany? Ary raha vao haingana ianao no lasa Vavolombelon’i Jehovah, inona no ataonao loha laharana? Na ahoana na ahoana, dia hodinihintsika izao ireo porofo lehibe telo mahatonga antsika hatoky fa efa hanao zavatra ilay Mpanjaka voatendrin’Andriamanitra, ka hatao etỳ an-tany ny sitrapon’Andriamanitra.
EFA TONGA IREO MPITAINGIN-TSOAVALY
4, 5. a) Inona no nataon’i Jesosy nanomboka tamin’ny 1914? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.) b) Inona no dikan’ireo mpitaingin-tsoavaly telo nanaraka an’i Kristy, ary ahoana no nahatanterahan’io faminaniana io?
4 Nomena satroboninahitry ny mpanjaka i Jesosy Kristy, tamin’ny 1914. Oharina amin’ny mpitaingina soavaly fotsy izy. Nanomboka nanao zavatra avy hatrany izy mba handresena ny tontolon’i Satana. (Vakio ny Apokalypsy 6:1, 2.) Asehon’ilay faminaniana ao amin’ny Apokalypsy toko faha-6 fa hiharatsy haingana ny fiainana rehefa manomboka manjaka ny Fanjakan’Andriamanitra. Hita amin’ireo mpitaingin-tsoavaly telo nanaraka an’i Kristy fa hisy ady, mosary, areti-mandringana, ary olana hafa mahafaty, eran-tany.—Apok. 6:3-8.
5 Efa voalaza fa ‘hesorina ny fandriampahalemana amin’ny tany.’ Nitranga izany na dia nampanantena aza ireo firenena hoe hiara-miasa sy hihavana. Vao fiandohan’ireo ady mahatsiravina ny Ady Lehibe I, rehefa jerena ny zava-mitranga vao haingana eran-tany. Mandroso be koa ny siansa sy ny toe-karena nanomboka tamin’ny 1914, nefa mbola misy foana ny mosary, izay mety hampisy korontana eran-tany. Iaraha-mahita koa fa olona an-tapitrisany no maty isan-taona, noho ny aretina isan-karazany sy ny hetraketraky ny natiora ary ny loza hafa. Miely kokoa sy mateti-pitranga kokoa ary mahafaty olona maro kokoa ireo loza ireo ankehitriny. Takatrao ve ny dikan’izany?
Vao mainka miharatsy ny fiainana, nanomboka tamin’ny nivoahan’ireo mpitaingin-tsoavaly (Fehintsoratra 4, 5)
6. Iza no nahita hoe tanteraka ny faminanian’ny Baiboly, ary nahatonga azy ireo hanao inona izany?
6 Nitana ny sain’ny olona maro ny Ady Lehibe I sy ny gripa espaniola. Ny Kristianina voahosotra kosa efa nanantena fa hifarana amin’ny 1914 ny Andron’ny Jentilisa na ny “fe-potoana voatondro ho an’ny hafa firenena.” (Lioka 21:24) Tsy tena azony antoka izay hitranga, nefa fantany fa hisy fiovana lehibe mifandray amin’ny fitondran’Andriamanitra amin’io taona io. Tonga dia sahy nitory izy ireo hoe efa nanomboka nitondra ny Fanjakan’Andriamanitra, raha vao takany fa tanteraka ny faminaniana. Nenjehina mafy izy ireo vokatr’izany. Nisy fanenjehana tany amin’ny tany maro, ka tanteraka koa ny faminaniana hafa. ‘Nitetika ny hanisy ratsy tamin’ny alalan’ny lalàna’ ny fahavalon’ilay Fanjakana, taona maro taorian’izay. Nampiasa herisetra izy ireo sady nampiditra am-ponja. Nisy rahalahy koa nahantona na notifirina na notapahin-doha.—Sal. 94:20; Apok. 12:15.
7. Nahoana ny ankamaroan’ny olona no tsy mahatakatra ny dikan’ny zava-mitranga eran-tany?
7 Nahoana ny ankamaroan’ny olona no tsy manaiky hoe efa manjaka any an-danitra ny Fanjakan’Andriamanitra, na dia maro be aza ny porofo manamarina izany? Nahoana no tsy hainy ny mampifandray ny zava-mitranga eran-tany sy ny faminanian’ny Baiboly, izay efa notorin’ny mpanompon’i Jehovah hatry ny ela? Variana amin’izay hitan’ny masony fotsiny ve izy ireo? (2 Kor. 5:7) Sa revo amin’ny fiainany, ka tsy mahita izay ataon’Andriamanitra? (Mat. 24:37-39) Sa variana amin’ny hevitra manintona aelin’i Satana? (2 Kor. 4:4) Mila finoana isika ary tsy tokony hianina amin’izay hitan’ny maso, raha te hahatakatra izay mitranga any an-danitra. Tena faly isika satria mahalala an’izay tena mitranga.
VAO MAINKA MIHARATSY NY OLONA
8-10. a) Inona no manaporofo fa tanteraka ny 2 Timoty 3:1-5? b) Nahoana no azo lazaina fa vao mainka miharatsy ny olona?
8 Fantatsika koa fa tsy ho ela dia hitondra ny tany ny Fanjakan’Andriamanitra, satria vao mainka miharatsy ny toetran’ny olona. Efa ho 100 taona izao no hita fa manana an’ireo toetra voalazan’ny 2 Timoty 3:1-5 ny olona. Vao mainka hita hatraiza hatraiza ireo toetra ireo. Tsy ekenao ve fa marina izany? Handinika ohatra vitsivitsy manaporofo an’izany isika.—Vakio ny 2 Timoty 3:1, 13.
9 Diniho izay mitranga ankehitriny any am-piasana, sy eo amin’ny sehatry ny fialam-boly sy ny fanatanjahan-tena ary ny lamaody. Efa tsy mampaninona ny olona intsony ny zavatra manafintohina tamin’ny taona 1940 ka hatramin’ny 1960 tany ho any. Efa lasa mahazatra ny herisetra mahatsiravina sy ny fitondran-tena maharikoriko. Ifaninanana ny hoe iza no mahery setra na ratsy fitondran-tena indrindra. Heverina ho fialam-boly mety tsara amin’ny mpianakavy ny fandaharana tamin’ny tele noheverina ho ratsy talohan’ny taona 1960. Maro koa no mahamarika fa omen-danja be eo amin’ny fialam-boly sy ny lamaody ny lehilahy miray amin’ny lehilahy na ny vehivavy miray amin’ny vehivavy. Mitaona ny olona an-karihary mba hanaraka ny ataony izy ireo. Tena faly isika satria mahalala ny fihevitr’Andriamanitra.—Vakio ny Joda 14, 15.
10 Ampitahao koa ny ditran’ny tanora talohan’ny taona 1960 sy ny ditran’ny tanora ankehitriny. Ara-drariny ny ray aman-dreny tamin’izany raha natahotra sao mifoka sigara ny zanany, na misotro toaka, na manao dihy mamoafady. Lasa mahazatra be anefa izao ny tatitra mampivarahontsana, ohatra hoe nisy mpianatra 15 taona nitifitra ny iray kilasy taminy, ka 2 no maty ary 13 no naratra. Nisy tanora maromaro koa mamo ka nampijaly ankizivavy iray sivy taona ary nahafaty azy, sady nidaroka ny dadan’izy io sy ny havany iray. Tanora daholo koa no nanao ny antsasaky ny heloka bevava nitranga tao anatin’ny folo taona, tany amin’ny tany iray any Azia. Dia mbola hisy sahy handa ve hoe vao mainka mitombo ny faharatsiana?
11. Nahoana ny olona maro no tsy mahamarika fa vao mainka mitombo ny faharatsiana?
11 Marina ny tenin’ny apostoly Petera hoe: “Amin’ny andro farany, dia hisy mpaneso ho tonga haneso, sady mandeha araka ny faniriany, ka milaza hoe: ‘Aiza akory izay fanatrehany nampanantenaina eo? Efa hatramin’ny andro nahafatesan’ny razantsika no tsy niova ny zava-drehetra fa mbola mitovy tanteraka amin’izay nisy hatrany am-piandohan’ny famoronana.’ ” (2 Pet. 3:3, 4) Nahoana no misy mihevitra toy izany? Angamba satria tsy mahataitra intsony ny zavatra iray rehefa lasa mahazatra. Mety ho taitra be, ohatra, isika raha miova tampoka ny namantsika akaiky. Mety tsy ho taitra loatra kosa isika raha miova tsikelikely ny fitondran-tenan’ny olona, ary miharatsy foana. Mampidi-doza anefa izany.
12, 13. a) Nahoana no tsy tokony hahakivy antsika ny zava-mitranga eran-tany? b) Inona no tokony ho takatsika, raha tiantsika ny hahavita hiatrika an’izao fiainana “tsy mora setraina” izao?
12 Nampitandrina antsika ny apostoly Paoly fa tsy ho “mora setraina” ny fiainana “amin’ny andro farany.” (2 Tim. 3:1) Azo atao anefa ny miatrika an’ilay izy. Mila miatrika ny zava-misy àry isika fa tsy hanao izay hialana amin’izany. Hanampy antsika i Jehovah sy ny fanahiny ary ny fiangonana, ka ho afaka ny tsy hivadika isika, na inona na inona mandiso fanantenana na mampahatahotra antsika. Avy amin’Andriamanitra “ny hery fanampiny” fa tsy avy amintsika.—2 Kor. 4:7-10.
13 Nilaza i Paoly hoe “aoka ho fantatrao izao”, talohan’ny nilazany ilay faminaniana momba ny andro farany. Midika izany fa azo antoka hoe hitranga izay nolazainy manaraka. Azo antoka àry fa vao mainka hiharatsy ny olona mandra-pandringan’i Jehovah ny ratsy fanahy. Asehon’ny tantara fa rava ny fiaraha-monina sy ny firenena sasany, rehefa niharatsy be ny fitondran-tenan’ny olona tao aminy. Mbola tsy ratsy toy ny amin’izao anefa ny fitondran-tenan’ny olona eran-tany. Mety tsy hiraharaha ny dikan’izany ny olona maro. Miaiky anefa isika rehefa mandinika ny toetran’ny olona nanomboka tamin’ny 1914, fa efa hanao zavatra ny Fanjakan’Andriamanitra.
TSY HO LANY ITY TARANAKA ITY
14-16. Inona koa no mahatonga antsika hino fa efa ho “tonga” ny Fanjakan’Andriamanitra?
14 Nahoana koa isika no matoky fa efa hanao zavatra ilay Mpanjaka voatendrin’Andriamanitra? Diniho ny zava-nitranga teo anivon’ny vahoakan’Andriamanitra. Nisy voahosotra tsy mivadika vitsivitsy nazoto nanompo an’i Jehovah, talohan’ny nanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra tany an-danitra tamin’ny 1914. Inona no nataon’izy ireo, rehefa tsy tanteraka ny zavatra sasany nantenainy tamin’io taona io? Nanompo an’i Jehovah foana ny ankamaroany, na dia niharam-pitsapana sy nenjehina aza. Tsy nivadika mandra-pahafatiny ny maro taminy, na izy rehetra mihitsy.
15 Hoy i Jesosy rehefa nilaza an’ilay faminaniana feno tsipiriany momba ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity: “Tsy ho lany mihitsy ity taranaka ity, mandra-pisehon’izany rehetra izany.” (Vakio ny Matio 24:33-35.) Fantatsika fa antokona voahosotra roa no tiany horesahina amin’ilay hoe “ity taranaka ity.” Velona tamin’ny 1914 ireo anisan’ny antoko voalohany, ary nahatakatra fa nanomboka tamin’io taona io ny fanatrehan’i Kristy. Tsy hoe velona tamin’ny 1914 fotsiny izy ireo, fa tamin’io taona io na talohan’izay koa izy ireo no lasa zanak’Andriamanitra voahosotry ny fanahy.—Rom. 8:14-17.
16 Ary iza no ao amin’ilay antoko faharoa? Ireo Kristianina voahosotra velona nandritra ny fotoana nahaveloman’ireo anisan’ilay antoko voalohany. Tsy vitan’ny hoe velona tamin’izany izy ireo, fa tao anatin’io fotoana io koa izy no voahosotry ny fanahy. Tsy ny voahosotra rehetra velona ankehitriny àry no anisan’ilay “taranaka” noresahin’i Jesosy. Efa mihantitra izao ireo anisan’ilay antoko faharoa. Manome toky antsika anefa ny tenin’i Jesosy ao amin’ny Matio 24:34 fa “tsy ho lany mihitsy” ireo anisan’ilay “taranaka”, raha tsy efa mahita ny fiandohan’ny fahoriana lehibe, na dia ny sasany amin’izy ireo monja aza. Vao mainka izany tokony handresy lahatra antsika fa kely sisa dia handringana ny ratsy fanahy ilay Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra, ary hampisy tontolo vaovao hanjakan’ny fahamarinana.—2 Pet. 3:13.
HANDRESY TSY HO ELA I KRISTY
17. Inona no ianarantsika avy amin’ireo porofo telo nodinihintsika teo?
17 Inona no ianarantsika avy amin’ireo porofo telo nodinihintsika teo? Nilaza i Jesosy fa tsy ho fantatsika na ny andro na ny ora, ary tsy fantatsika tokoa izany. (Mat. 24:36; 25:13) Nilaza kosa i Paoly fa azo fantarina ny “fotoana.” (Vakio ny Romanina 13:11.) Fantatsika fa efa andro farany izao “fotoana” iainantsika izao. Miharihary fa efa tena akaiky hifarana ity tontolo ity, rehefa dinihina ny faminanian’ny Baiboly sy izay ataon’i Jehovah sy Jesosy.
18. Inona no hanjo an’ireo tsy manaiky ny Fanjakan’Andriamanitra?
18 Tsy ho ela dia voatery hiaiky ny fahadisoany ireo rehetra tsy manaiky ny fahefan’i Jesosy Kristy, ilay mitaingina soavaly fotsy. Tsy ho afa-miala amin’ny fandringanana izy ireo. Maro no ho raiki-tahotra ka hiantsoantso hoe: “Iza no mahajoro?” (Apok. 6:15-17) Hisy hahajoro tokoa anefa, araka ny Apokalypsy toko faha-7. ‘Hahajoro’ ireo voahosotra sy ireo manantena hiaina eto an-tany, satria hankasitrahan’Andriamanitra. Ho tafavoaka velona amin’ny fahoriana lehibe ny “vahoaka be” anisan’ny ondry hafa.—Apok. 7:9, 13-15.
19. Koa satria ianao matoky fa efa akaiky ny farany, inona no tsy andrinao?
19 Tsy ho variana amin’ny hevitra aelin’ny tontolon’i Satana isika, raha mandinika tsara ny fahatanterahan’ny faminanian’ny Baiboly. Ho takatsika koa ny tena dikan’ny zava-mitranga eran-tany. Tsy ho ela i Kristy dia hiady araka ny fahamarinana, ka handresy tanteraka an’ity tontolo ity. (Apok. 19:11, 19-21) Manome toky ny Baiboly fa ho sambatra isika aorian’izay.—Apok. 20:1-3, 6; 21:3, 4.